सपनाको गोप्य तस्विरहरु निकालेर देखाइदिम भन्दै बिनय रिसाउँदै आए मिडियामा – Gazabkonews
टिक टिक एक सोसल मिडिया एप्लि:केसन हो । जसका माध्यमबाट स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले छोटा छोटा भिडियो (१५ सेकेण्ड सम्मका) बनाएर शेयर गर्न सक्दछन् । बाइट डान्स नामक कम्पनीले यो एप बनाएको हो । टिक टक सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा लञ्च भएको हो । सन् २०१८ मा टिक टक लोकप्रियताको चुलीमा पुग्यो । गत अक्टोबरमा टिकटक अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एप बन्न पुग्यो ।
गुगल प्लेमा टिक–टकको परि:चय तपाईंको लागि छोटो भिडियो भनेर दिइएको छ । प्ले स्टोरमा टिकटकको बारेमा लेखिएको छ: टिकटक मोबाइलबाट छोटा छोटा भि:डियो बनाउने कुनै साधा:रण तरिका होइन । यसमा कुनै बनाबटीपना छैन र यसको कुनै सीमा छैन । चाहे तपाईं बिहान पौने ८ बजे ब्रस गरिरहेको हुनुस् वा नास्ता बनाइरहेको हुनुस् ।
चाहे तपाईं जेसुकै गरिरहेको र जहाँ सुकै हुनुहोस् टिकटकमा आउनुहोस् र १५ सेकेण्डमा दुनि’याँलाई आफ्नो कहा:नी बताउनुहोस् । टिकटकको साथमा तपाईंको जीवन अझै रोमाञ्चक हुन्छ । तपाईं जिन्दगीका हरेक पल जिउनु:हुन्छ र हरेक समय केही नयाँ खोजी गरिरह:नु भएको हुन्छ । आफ्नो भिडियोमा स्पे:शल इफेक्ट फिल्टर, ब्युटी इफेक्ट, इमोजी स्टिकर तथा म्युजिक हालेर नयाँ रङ्ग दिन सक्नुहुन्छ ।
टिक टकका केही खास तथ्य – टिक टकबाट भिडियो बनाउँदा तपाईंले आफ्नो आवाजको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न । केवल आ:वाज अनुसार ओठ चलाए (लिप सिङ्क गर्नु) पुग्छ । जसरी फेसबुक तथा ट्वीटरमा आफ्नो अकाउन्ट भेरिफा:इड गराउन अर्थात् ब्लू टिक पाउनका लागि प्रयोगकर्ताले निकै मेहेन’त गर्नुपर्दछ । त्यस्तै टिकटकमा भेरिफाइड अकाउन्ट:वाला प्रयोगकर्ताको संख्या निकै धेरै छ ।
तर टिकटकमा ब्लू टिक होइन सुन्तला रङको रेजा अर्थात् अरेन्ज टिक पाइन्छ । जसलाई अरेन्ज टिक प्राप्त’ हुन्छ त्यसको अकाउन्टमा पपुलर क्रिएटर लेखेको देखिन्छ । साथै उक्त अकाउन्ट’वालाको भिडियो कतिले मन पराए अर्थात् कति मुटु आ’कारको संकेत प्राप्त गर्यो भन्ने पनि थाहा पाइन्छ । टिकटक’का केही फाइदा पनि छन् ।
खासगरी गाउँ तथा स साना सह:रका लागि यो मानिसहरुको प्रतिभा देखाउने तथा मनोरञ्जन गर्ने निकै राम्रो माध्यम बनिरहेको छ । कतिपय मानिस यसको माध्यमबाट आफ्नो अभिन:य इच्छा पूरा गरिरहेका छन् । कतिले राम्रो कमेडी गर्छन् त कतिले राम्रो नाच । यतिमात्र होइन, धेरै मानिसहरुले टिकटकबा:ट पैसा पनि कमा:इरहेका छन् ।
विज्ञका अनुसार, कुनै पनि देशमा एप लञ्च गरेसँगै कम्पनीहरुले विभिन्न देशमा मान्छे खटाउँदछन् । आम रुपमा यस्ता मानिसहरुलाई भर्ती गरिन्छ जो देख्दा सुन्दर होउन्, कमेडी गर्न आओस् अनि गाउने तथा नाच्ने कला पनि होस् । उनीहरुले दैनिक रुपमा कुनै भिडियो तयार गरी टिकटकमा हाल्नुपर्दछ र यसका लागि उनीहरुलाई केही पैसा प्राप्त हुन्छ ।
साथै संघर्षको सुरुवाती चरणमा रहेका सेलिब्रे-टीहरुलाई पनि यसमा सामेल गरिन्छ । त्यसबाट कलाकारलाई पैसा मात्र होइन, आफ्नो क्षमता देखाउने प्ला-टफर्म पनि प्राप्त हुन्छ । अर्कोतर्फ कम्पनी तथा एपको प्रचारप्रसार पनि हुन्छ । यस-बाहेक कम्पनी तथा साधारण प्रयोगक-र्ताका लागि आम्दा-नीको छुट्टै मोडेल पनि हुन्छ । यदि कसै-ले आफ्नो भिडियोमा कोकाकोलाको बोतल देखाउँदछ ।
वा कुनै स्याम्पुको बोतल देखा:उँदछ भने भिडियोको लोकप्रि-यताको आधारमा ब्राण्ड प्रवद्र्ध-नको माध्यमबाट सम्बन्धि-त कम्पनीमार्फत एप निर्माता र भि:डियो अपलोड गर्ने दुवैलाई आम्दानी हुन्छ । भिडियोको भ्यूज, लाइक, कमेन्ट र शेयरको अनुपातमा टिकटक प्रयोगक-र्ताको कमाई तय हुन्छ । विज्ञह-रुका अनुसार अहिले धेरै सोसल मिडिया एप्सले भ्यूजको साटो इन्गेजमेन्ट तथा अन्तरक्रि-यामा धेरै ध्यान दिने गरेका छन् । अर्थात् तपाईंको भिडियो कति मानिसले हेरे भन्दा पनि कति धेरै मानिसले प्रतिक्रि:या जनाए त्यस आधारमा प्रयोग’कर्ताको कमाइ बढ्दछ ।
फाइदा मात्र होइन, खत’रा पनि – टिकटकमा सबै राम्रो कुरा मात्र छ भन्ने पनि होइन । यस:को नकारात्मक पाटो प:नि छ । गुगल प्ले स्टो:रमा भनिएको छ कि यो एप केवल ‘१३ वर्ष’माथिकाले मात्र चलाउन पाउँदछन् । यद्यपि, यो नियम पालना भएको देखिँदैन । बच्चाहरु:लाई पनि टिकटकमा भिडि:यो बनाएर राख्ने गरिएको छ । गोपनीय:ताको कुरा गर्ने हो भने टिककट निकै असुर’क्षित र खत:रनाक छ । किनकि यसमा के:वल दुईवटा प्राइभेसी सेटिंग्स गर्न सकिन्छः पब्लिक र वन्ली ।
अर्थात् भिडियो देख्नेहरुमा कुनै छनौट गर्न सकिँ’दैन । या त तपाईंले आफ्नो भि’डियो आफैंले मात्र हेर्ने, या त दुनियाँ सबैलाई देखाउने ।यदि कोही प्रयोगकर्ता आफ्नो टि’कटक अकाउन्ट डिलिट गर्न चा:ह्यो भने पनि आफ्नो मन:लाग्दी गर्न सक्दैन । यसका लागि उसले टिकटकसँग अनुरोध गर्नुपर्दछ ।न टिकट:क पूर्ण रुपमा सार्वजनि’क भएको हुँदा कसैले पनि टिकटकमा रहेको जो कसैला:ई फलो गर्न सक्दछ, मेसेज गर्न सक्दछ । यस्तोमा कुनै आप’राधिक प्रवृत्ति’का मानिसले टिकट’कमा सानो उमेरका बच्चा बच्ची तथा किशोर किशोरीहरुलाई गुमराह’मा राख्ने खतरा हुन्छ ।
टिकटक अकाउन्ट विभिन्न खाले अ’श्लील सा’माग्रीहरुले भरिएको छ । यसमा कुनै फिल्टर छैन । हरेक टिकट’क प्रयोगकर्ताले त्यो देख्न सक्दछ । विज्ञहरु’का अनुसार टिकटकमा कुनै पनि सामाग्री:को बारेमा उजुरी गर्ने माध्यम नभएको हुँदा यो सुरक्षा र गोप’नीयताको दृष्टिकोणले निकै खतरनाक हुनसक्छ । यस्तोमा टिकटक इन्टरनेटमा अरुको खि’ल्ली उडाउने वा दुर्व्य:वहार गर्ने अर्थात् साइ’बर बुलिङ्ग’को अस्त्र बन्न सक्दछ । यसमा अरु’लाई सहजै ट्रोल गर्न सकिन्छ ।
विज्ञहरुका अनुसार टिक-टक जस्ता सोसल मिडि;याले हाम्रो पूर्वाग्रह तथा मानसि:कताको पर्दाफास गरिरहेका छन् । यसमा मान्छेको मजा’क उडाउने चलन निकै बढेर गएको छ । टिकटक’लाई काबूमा राख्न आवश्यक भएको विज्ञहरु:को भनाई छ । सन् २०१८ को जुलाईमा इण्डोने:सियामा टिकटक’माथि प्रति-बन्ध लगाइएको थियो । किशोर किशोरीहरुले अश्लील सामाग्री अपलोड तथा शेयर गर्नका लागि टिकटक-को अत्यधि-क प्रयोग गर्न थालेपछि सरकारले यस्तो कदम चाले:को थियो ।
पछि केही परिवर्तन तथा शर्तना-मासँगै टिकटक-माथिको प्रति-बन्ध हटा-इएको थियो । कुनैपनि एप डाउनलोड गर्दा हामी निकै गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ । तर हा;मीले एप डाउ-नलोड गर्दा त्यसका गोपनिय-ताका शर्तहरुमा खासै ध्यान दिँदैनौँ । केवल येस तथा अल्लोमा टिक गर्दै अघि बढ्दछौँ । आफ्नो स्मार्ट’फोनको फोटो ग्यालरी, लोकेसन तथा फोन नम्बरहरु सबैमा एपलाई एक्सेस दिन्छौँ । त्यसप’छि हाम्रो डाटा कहाँ गैरहे’को छ ?
कसले केमा प्रयोग गरिरहे-को छ ? हामी-लाई केही थाहा हुँदैन । आजकल धेरैजसो एपहरुले आर्टि-फिसियल इन्टेलिजेन्सको सह-योगमा काम गर्दछन् । यस्तोमा यदि तपाइँले त्यस्ता एपलाई एकपटक मात्र प्रयोग गर्नुभयो भने-पनि ती एपले तपाइँ-सँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरु सधैका लागि जुटाइ-सक्दछ । त्यसैले टिक-टक जस्ता एपह’रुको प्रयोग गर्दा निकै होसि-यार हुनुपर्दछ । विवीसीटिक टक भि’डियो हेरौं